Muhiimadda kala go'idda shucuurta ee lamaanaha | Bezzia
Muhiimadda kala go'idda shucuurta labada lamaane
Maria Jose Roldan | 04/05/2021 22:00 | Xiriirka
Maaha wax aan caadi ahayn in la arko tiro badan oo xiriir ah oo ku saleysan ku xirnaan shucuur.. Dhibaatada ugu weyni waxay tahay in dad badani u arkaan lifaaqan inuu yahay wax iska caadi ah labada lamaane.
Si kastaba ha noqotee, isku dheelitirku maaha mid la mid ah jacaylka iyo xorriyadda iyo madaxbannaanida xiriir kasta oo fure ah marka ay timaado ku faraxsanaanta labada lamaane. Qodobka soo socda waxaan ku siineynaa tilmaamo taxane ah si aad ugu guuleysatid xoogaa kala go'id shucuur ah ee lammaanahaaga dhexdiisa
1 Furayaasha lagu ogaanayo inaad ku xanuunsaneyso isku xirnaanta shucuurta
2 Calaamadaha noocee ah ayaa ku dhaca isku dhejinta shucuurta
3 Muhiimadda kala go'idda shucuurta labada lamaane
Furayaasha lagu ogaanayo inaad ku xanuunsaneyso isku xirnaanta shucuurta
Mid ka mid ah dhinacyada ugu cad ee tilmaami kara inaad ku xanuunsaneyso ku xirnaanta, Waa xaqiiqda ah inaadan ku raaxeysanayn xorriyaddaada iyo madax-bannaanidaada qof ahaan. Lamaanahaaga oo aad maskaxda ku hayso markasta ma fiicna haba yaraatee waxayna sababi kartaa in xiriirku sun noqdo.
Faraxsanaanta kuma tiirsanaan karto lamaanaha markasta. Qofku waa inuu ku farxaa naftiisa iyo qof kale toona. Haddii tani aysan dhicin, waa caadi in xiriirka ka hadlaya uu ku saleysan yahay ku xirnaansho shucuur oo xoog leh qofka kale.
Calaamadaha noocee ah ayaa ku dhaca isku dhejinta shucuurta
Waxaa jira astaamo aad u cad oo caadi ahaan tilmaamaya inuusan qofku lahayn nooc madax-bannaan nooc kasta oo muujiyana isku xirnaan shucuur oo xoog leh:
Qofku ma awoodo inuu ku raaxeysto waqti kasta, haddii lamaanahaagu uusan joogin.
Lamaanaha waxaa lagu hayaa meel allabari iyo waxaad kaliya ku arkeysaa wanaag iyo waxyaabo wanaagsan oo ku saabsan.
Joogitaanka masayrka iyo cabsida laga qabo in waligeed la waayo.
Ma jiro kalsooni iyo kalsooni.
Waxaa jira xoogaa walwal iyo walwal si loo ogaado marwalba waxa lammaanuhu sameynayaan.
Sidii aan horeyba u soo sheegnayba, ku xirnaanshaha shucuurta uma fiicna lamaanaha maadaama aysan caafimaad u qabin labada qof midkoodna. Fikrad ahaan, go'itaanku waa inuu jiraa markasta:
Waa hal shay inaad ku noolaato lamaane noloshana aad la wadaagto qof kale iyo wax kale oo ah in nolosha lagu soo koobo lamaanaha gebi ahaanba. Waa lama huraan inaad haysato nolol adiga kuu gaar ah si aad u awoodo inaad wax u qabato shaqsi ahaan sida la raacida asxaabta ama dukaameysiga.
Farxaddu yaanay ku koobnaan oo keliya labada isqabta. In kasta oo aad xiriir la leedahay qof, waa inaad ogaataa sida loo keli ahaado oo aad ugu raaxeysato kalinimo gaar ah waqti ka waqti.
Kama tiirsanaan kartid qof kale inuu faraxsanaado. Qofka qaangaarka ah waa inuu helaa farxad naftiisa, soo aan cidna caawinayn.
Lamaanayaashu kuma salaysnaan karaan kalsooni darro maxaa yeelay taasi caafimaad uma aha xiriirka noocan oo kale ah. Aaminaadu waa tiirka aasaasiga ah ee xiriir gaar ah ay tahay in lagu dhiso. Hadday taasi dhacdo ma jirto sabab ay u muuqato masayrka laga baqo. Marka laga soo tago halkaas oo ay jirto go'doon, sidoo kale waa muhiim in wada hadal dhex maro labada qof.
Gaaban, Xiriir kasta oo loo arko inuu caafimaad qabo waa inuu ku saleysnaadaa go'aanka shucuureed ee dadkaan. Kala go'itaankani wuxuu fure u yahay xiriirka in la xoojiyo oo labada xubnoodba runtii way ku faraxsan yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Muhiimadda kala go'idda shucuurta labada lamaane
Waxa lagu arko laguna sameeyo magaalada Córdoba ee Andalusia
Faahfaahinta yar ee kaa hortaagan inaad hesho nolol caafimaad leh